पानी आउने वित्तिकै ढल खोल्ने ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
पानी आउने वित्तिकै ढल खोल्ने ?
Published On : ३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०८:५४
बजार भन्ने वित्तिकै विकसित ठाउँ हो । बजारका मान्छेहरुमा चेतनाको स्तर पनि माथि नै भएको ठानिन्छ । तर, गोरखा बजारमा आकाश कालो भएर जब पानी बर्सन्छ, प्राय मान्छेहरु हत्तपत्त आफ्नो घरको सेफ्टी ट्याङ्की खोल्न तम्सन्छन् । केही दिन यता दिनहुँजसो पानी परेको छ । हरेक दिन जसो नै गोरखा बजारको बसपार्क देखि प्रतिक्षालय सम्म पानी परेको बेलामा नाक नै पोल्ने गरी शौचालयको दुर्घन्ध फैलिएको छ ।
बजारमा गगनचुम्बी घर बनाउनेहरुले त्यत्ति शौचालयको फोहोर फाल्ने खर्च गर्न नसकेकै हुन् त ? नगरपालिकाले सेफ्टी ट्याङ्कीको फोहोर फाल्न ट्याङ्करको ब्यवस्था गरेकै छ । केही रकम खर्चेर शौचालयको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने बजारीयाहरुसँग नगरपालिकाले एक्सन लिनुपर्छ । बजारमा दुर्घन्ध फैलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गोरखा नगरपालिकाले कडा कदम चाल्नु पर्छ । नगरपालिकाले यस विषयमा गोरखा उद्योग वाणिज्य संघसँग तत्कालै छलफल गरेर जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई केकस्तो कारबाही, जरिवाना तोक्ने हो तोकेरै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
हुन त बजारमा बस्ने मानिसलाई जथाभावी फोहोर फालेर कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाँस्यास्पद हो । किन की जस्ले फोहोर फाल्छ उनीहरुले नै फोहोर फाल्नु हुँदैन, पानी पर्ने वित्तिकै ढल, नाली खोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन् । यति हुँदा हुँदै पनि बुझेर बुझ पचाउने, वातावरण र अन्य ब्यक्तिको स्वास्थ्यको ख्याल नगर्नेहरुलाई गोरखा नगरले प्रशासनको सहयोग लिएरै भएपनि नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लायन्स मोडल भिलेज संवृद्ध बनोस्
लायन्स क्लवले गोरखा नगरपालिका १० वीरेञ्चोकस्थित तीनघरेमा लायन्स नमूना बस्ती(लायन्स मोडेल भिलेज) बनाउन सुरु गरेको
मालपोतको काममा गुणस्तरको सवाल
सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालय अन्तर्गत पर्छ, मालपोत कार्यालय । जहाँ सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा होओस् काङ्ग्रेसको पालिका अधिवेशन
अहिले गोरखामा सबैभन्दा धेरै चहलपहल काङ्ग्रेस नेता, कार्यकर्ताको छ । १४ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको
छेकम्पार र चुम्चेतको समस्या समाधान गर
भदौ दुई गते झरेको पहिरोले चुम्चेत र छेकम्पार जाने पदमार्ग क्षतविक्षेत छ । ३८ दिन